महिनाबारी पछि कुन दिनको से; क्स’ सबैभन्दा सुरक्षित ? – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र २३, २०७८ समय: २०:०४:१६
एजेन्सी । महिनावारी अघि र भएपछिका केही निश्चित दिनमा यौ/न स/म्पर्क गर्नाले ग,र्भ रहँदैन भन्ने पुरानो मान्यता छ । जसलाई अहिलेका आधुनिक अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरेको छ ।त्यसैले विज्ञहरुले परिवार नियोजनको एउटा विकल्प अर्थात ‘सेफ से/क्स पिरियड’ भनेर मानेका पनि छन् ।आज हामीले त्यहि कुरामा चर्चा गर्दैछौँ, कुन दिनको से/क्स सुरक्षीत हुन्छ ?
३. महिनावारी भएको ११ देखि १६ दिन : साधनविना गरिने यो बेलाको यौ/नस/म्पर्कले ग/र्भरहने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । डिम्व बाहिर आएर बस्ने भएकोले यो बेलामा हुने साधनबिनाको यौ/नस/म्पर्कले ग/र्भरहने सम्भावना ८० प्रतिशत सम्म रहने बताउछन् ।
नोट : विभिन्न अनुसन्धानले सुरक्षित र असुरक्षित समय र दिन तोके पनि सबैमा यो लागू हुन्छ भन्ने छैन । सून्य देखि ५ प्रतिशत सम्भावना जहिले पनि रहन्छ । त्यसैले परिवार नियोजनको भरपर्दो साधन अपनाउनु सबैभन्दा भरपर्दो हुन्छ ।